कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि ९ औँ पटक ब्राजिलले उचाले
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति २३ असार २०७६, सोमबार ०६:१९
कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि माथि ब्राजिलले जितेको छ । नेपाली समय अनुसार सोमबार बिहान १ः४५ बजे भएको पेरु विरुद्धको खेलमा ३ का विरुद्ध १ गोलले पाखा लगाउदै ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि रच्न सफल भएको हो । यो जितसँगै ब्राजिल ९ आंै पटक कोपा अमेरिका फुटबलको विजेता बन्न सफल भएको छ ।
ब्राजिललाई जिताउन खेलको १५ औ मिनेटमा इभरटनले जाली चुमाएका थिए । त्यसैगरी खेलको ४८ आंै मिनेटमा ग्रबिअल जिजसले गोल गर्दै गोल संख्या दोब्बर पारेका थिए । पहिलो हाफमा २ गोलले आगाडी रहेको ब्राजिलले खेलको ९० औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै रिचालीसनले जालि चुमाए पछि ब्राजिलको गोल संख्या तेब्बर बनेको थियो । खेलको अन्तिम समयमा ग्रबिअल जिजसले रातो कार्ड खादा १० जना खेलाडीमा सीमित रहेको ब्राजिल ९ औँ पटक कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि जित्न सफल भएको हो ।
खेलमा पेरुका लागि एक मात्र सान्तवना गोल खेलको ४४ आंै मिनेटमा गवारोटो पाउलोले पेनाल्टी मार्फत गरेका थिए । यता पेरुका खेलाडीले प्रहार गरेको बललाई ब्राजिलीयन गोलरक्षक एलिसनले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए । हारसगै पेरुले कोपा अमेरिका फुटबलको उप विजेतामा चित बुझाएको छ ।
एस.ई.ई. को समय तालिका परिवर्तन , कुन विषय कहिले ? तालिको सहित हेर्नुस्
युवतीमाथि सिरिन्ज प्रकरण : बनेपाबाट पक्राउ परे स्याङ्जाका शिक्षक